Kuva neIIL certification pasi pemishura yako ibatsiro guru kumabasa ako. Iko hakusi kungovandudza kukwanisa kwebasa remariro nenzira yekuwedzera inotsigira chikamu chepamusoro mune chero sangano. Kuva chipo chikuru kune yako zvakare, inopa kunzwisisa kumurume anotevera ari kumativi ekudana komunhu wekudzidza mu IT Service Management.
Bhizinesi rimwe nerimwe rebhizimisi munyika yekambani, nehupiro yakasiyana, inofanirwa kupa rubatsiro rwakanakisisa rwevanobatsira. Chiripo chiyero nhasi, chikuru chikwata, chakakwirira ndicho chiedzo chavanosangana nacho pamusika uye chinonyanya kukoshesa kusundira kwavo kurwisana nemashure emuedzo mumwe nomumwe. Nyika inomhanya pane zvinotarisirwa, masangano ehurumende, zvishoma kana kuti zvishoma pakuguma zvinosangana nenguva dzakanaka uye dzakaipa mumusika. Kutarisana nematambudziko ose anonyanya kuchenjera ekugadzirisa nebhizimisi ndeyekutarisa pane zvisizvo zvakaitwa, kubva zvino zvichiita kuti matambudziko ematambudziko akakura. Nokutora homwe iripo Dzebhizimisi Dzemabhizimisi anotarisa kune humwe hutano huri nani hwemasangano makuru.
Kurumbidzwa nezvimwe zvinhu zvakasiyana:
Nhengo dzakasiyana-siyana nhasi dzinovimba nezveshanduro. Kuwedzera kwakanyanya kwekupedzisira kwechimiro che ITIL. Nzira dzakatorwa mushure mekugadziriswa kweTIL dzinobatsira sangano kuti rive nechokuita nemari yaro yakafanana. ITIL muhutano yakaguma kuva kubudirira kwazvo kune avo, zvichizosimudzira kufarira vadzidzisi veItIL. Ikudzidzisa kweIIL kunopa ruzivo rwepamusoro kusvika pasi pamusoro peITSM kune avo vanobhabhatidzwa, zvichiita kuti ivo vanyatsotarisa mushure mekusangana kwesangano. ITIL yakagadzirira basa rekushanda haisi kungopiwa bundle rakanaka sekubhadhara asi panguva imwechete inoshandiswa kune zvikamu zvinokwanisa mubhizinesi. Nhamba huru yebhizimisi zvinhu zvakapoteredza yakatsigira ITIL. Shamwari dzakadai saBoing, Hewlett-Packard, IBM, Microsoft, Pfizer, Toyota, Walmart, NASA Disneyland uye zvimwe zvakawanda zvakagamuchira ITIL. Sangano rinoshandisa ITIL rakagadziriswa ad lib inokwanisa uye kukwana kwezvose zviripo uye zvitsva nzira dzehutano hwavo nesheyo.
Zviri nani Mabasa aJobho:
ITIL kudzidziswa ndeye nhoroondo dzose sechimbo chekufungidzira chinogadzirisa nzira yeramangwana rakajeka. Nyanzvi dzinozvipira ITIL kudzidziswa vari kuwana zvakanyanya kudarika avo vanopupurirwa mune zvakasiyana-siyana. Inopa zvokudya chikamu chepamusoro nekuwedzera kune vanhu vari ikozvino mumunda weTI masangano. IFOR certification inovandudza iyo mazano nevadzidzisi veITSM nemukana wekuvandudza chikamu chavo uyezve inoratidza kubatsira kune avo bhizinesi vezvebhizimisi vanobatanidzwa mumasangano eT IT uye maTI.
Nyanzvi dzinobatanidzwa muTI Services Management, Project Management, Service Operations uye Service Designs uye maitiro anobatsira zvikuru kubva kuIITIL certification. Kunze kweizvi VAKID vanozivikanwa vanogona kuedza maoko sevanenge vari kutungamira kwehutungamiri hweT IT, vatsigiri vekutsigira, rubatsiro rwekambani uye vanobatsira madhijinii. Kudzidziswa muIITIL kunopa murume kuti avake zvakare nokuda kwekufambira mberi kwechangobva kuitika mune zvitsva uye kumutsigira nekwanisi yekutarisana nematambudziko emunda.
An ITIL certification inobatsira murume kuwedzera zvakananga kune zvakare zvakare kuvandudza matanho ake ehutarisiro hwepamusoro. Sezvo kushamwaridzana kwemazuva ano kwekombiyuta kwave kwakatanga kubatanidza zvigadziro zvavo neIl idea, ivo vari mukuda kukuru ITIL nyanzvi dzakadzidziswa. Haisi kukanganisa kutaura kuti nokukurumidza panzvimbo pekupedzisira, kusingagumi kubva kune zvisizvo zvinokurudzira zvitsva, ITIL certification zvinogona kuguma zvakajeka zvakamanikidzwa kune avo vanoda kutsvaga ivo pachavo mune zvebhizimisi re IT.
Pano bhaibheri rakabatana pamusoro Nhanho nehanho Bhuku reTIL certification
Mhinduro Mubvunzo uye Mhinduro dzeIIT Exam 2017